Monday November 19, 2018 - 09:10:52 in Wararka by
Ra'yi ururin laga qaaday Dadka Australia ayey ku sheegeen in ay doonayaan in la dhimo dadka Muslimiinta ah ee qaxootinimada ku gala dalkaas.
Arrintan ayaa ka dhalatay kaddib markii Todobaadkii hore Nin Soomaali ah uu weeraray Dad ku sugnaa Magaalada Melbourne halkaas oo uu ku dilay hal qof labo kalena ku dhaawacay.
Wargeyska Fairfax-Ipsos, oo sahankan sameeyay ayaa ogaaday in 46% Dadka Australia ay doonayaan in la dhimo Muslimiinta soo galootiga ah ee degganaanshaha ka hela dalkaas.
Sanadkii 2010kii ilaa 2016kii Dalka Australia waxaa dib u dejin ka helay dad ka badan Hal Milyan oo qof oo soo galooti ah,waxaan tiradaas ay aad uga badan tahay tiro kasta oo qaxooti ay qaabishay Australia.
14% dadka la wareystay ayaa oggolaaday in dadka gelaya Australia la kordhiyo, 46% waxaa ay dalbadeen in la dhimo Dadka Muslimiinta ah,halka 45% ay dalbadeen in guud ahaan la dhimo dadka soo galootiga ah oo aan Diin loo kala saarin.
Xasan Shire Cali oo Soomaali ah ayaa weerar ku qaaday dad ku sugnaa Melbourne halkaas oo uu qof ku dilay labo kalena dhaawacay,weerarkaas waxaa sheegatay Daacish oo xustay in Xasan oo ka mid ahaa dagaalyahannadeeda.